ဘောင်ဘီခါဝန် အတိုလေးနဲ့ အွန်လိုင်းပေါ် မှာ ဂယက် ထသွား တဲ့ စုလှိုင်ဝင်း ရဲ့ အက…. – Shwe Naung
ဘောင်ဘီခါဝန် အတိုလေးနဲ့ အွန်လိုင်းပေါ် မှာ ဂယက် ထသွား တဲ့ စုလှိုင်ဝင်း ရဲ့ အက….
N N | September 1, 2021 | Celebrity | No Comments
ချစ်ပရိသတ်ကြီးရေ အကပိုင်းမှာ ထူးချွန် လွန်းသူလေး တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ စုလှိုင်ဝင်း ကတော့ ထူးခြားတဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ကောက်ကြောင်း အလှကြောင့် ပုရိသ ကိုကိုတို့ရဲ့နှလုံးသားကို အပိုင် သိမ်းထားနိုင် သူလေးတစ်ဦး ဆိုရင် လည်း မမှားပါဘူး။ အမြဲလိုလို Cover Dance ဗီဒီယို လေးတွေကို ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ ကပြလေ့ ရှိတဲ့ စုလှိုင်ဝင်းကတော့
အလန်းစားက ကွက်တွေ နဲ့ ပရိသတ် တွေ ကို ဖမ်းစားလေ့ ရှိပါတယ်။ လတ်တလော မှာလည်း ကိုရီးယား အဆိုတော်မလေး Sunmiရဲ့ နာမည်ကြီး သီချင်းတွေဖြစ်တဲ့ Gashina နဲ့ Siren သီချင်း ၂ပုဒ်ကို အလန်းစားက ပြခဲ့တာကြောင့် ပရိသတ်တွေ အားလုံးက သဘောကျ နေကြတာပါ။
ခန္ဓာကိုယ် ကောက်ကြောင်းအလှ တွေကို ပါးပါးလျလျလေး လှစ်ဟာ ပြသွား တဲ့ သူမရဲ့ ကကွက်တွေကတော့ ရင်ဖိုစရာ ကောင်းလှပါတယ် နော်စုလှိုင်ဝင်းကတော့ လတ်တလောမှာ ကျောင်းတက်ရင်း အနုပညာ လှုပ်ရှားမှုတွေ လည်း လုပ်ဖြစ်နေတာပါ။
ဟာခနဲ ဖြစ်သွား စေမယ့် စုလှိုင်ဝင်းရဲ့ အမိုက်စား အက ဗီဒီယို ထူးခြားတဲ့ အက ဗီဒီယို လေးတွေနဲ့ ပရိသတ် တွေရဲ့ အာရုံကို ဖမ်းစား ထားနိုင်တဲ့ စုလှိုင်ဝင်းကတော့ အခုဆိုရင် အားပေးတဲ့ ပရိသတ် အခိုင်အမာ ရရှိ နေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပရိသတ် တွေစိတ်ဝင်စားနေကြတဲ့ စုလှိုင်ဝင်းရဲ့ အချစ်ရေးကတော့ အခုချိန် ထိကို အေးဆေး ငြိမ်သက် နေဆဲပါပဲ။ဖတ်ရှုအားပေးသော ချစ်ပရိသတ်ကြီးလည်း သာယာပျော် ရွှင်သောနေ့လေး ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ လို့ဆုတောင်းပေး လိုက်ပါတယ်။
လုံးကြီး ပေါက်လှ အမိုက်စား ကောက်ကြောင်းလေးနဲ့ ဆက်ဆီကျကျ ပိုစ့်ပေးနေတဲ့ ဂုဏ်ရှိန်ဝင့်ထည်ရဲ့ အလှ ပုံရိပ်လေးများ…………
တစ်သွေးထဲ တစ်သားထဲ နဲ့ နွေဦးတော်လှန်ရေးမှာ ပြည်သူတွေနဲ့အတူရပ်တည်ပေးခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင်ပြေတီဦးရဲ့ ဖခင် အရေးပေါ်အောက်စီဂျင်လိုအပ်နေ
ရင်ခုန်သံတွေ မြန်သွားအောင် အလန်းစား ဖက်ရှင်လေးနဲ့ မိမိုက်နေတဲ့ မိုးမြင့်သဇင်ရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးများ…………
အနာဂါတ် အတွက်ကို ရင်တွေလေးနေတယ်လို့ ပြောချပြီး စားပြလိုက်တဲ့ ကိတ်လွန်း နေတဲ့ သူမရဲ့ ဆက်ဆီကျကျ ပုံတွေတင်ပေး လိုက်တဲ့ ဂုဏ်ရှိန်ဝင့်ထည်……
ဖြူဖွေးနေတဲ့ ကိုယ်လုံးလေးနဲ့ ညို့အားပြင်းပြင်း လှပနေတဲ့ မေဘရဏီစံရဲ့ အလှ ပုံရိပ်‌လေးများ………….
ဖက်ရှင် အလန်းစားလေးနဲ့ အရမ်းကို ချစ်စရာ ကောင်းပီး လှပနေတဲ့ ပတ်ထရစ်ရှာရဲ့ အလှ ပုံရိပ်လေးများ…………
ကြွေချင်စရာ ကောင်းလောက်အောင် ဆက်ဆီကျကျ ကိုယ်လုံးလေးနဲ့ လှပနေတဲ့ သင်းရတီခင်ရဲ့ အလှ ပုံရိပ်လေးများ……………
အလန်းစား ဖက်ရှင်လေးနဲ့ ဆက်ဆီကျကျ လှပနေတဲ့ အိချောပိုရဲ့ အလှ ပုံရိပ်လေးများ………..
အမိုက်စား ကိုယ်လုံးလေးနဲ့ အထာကျကျ ပိုစ့်တွေ ပေးနေတဲ့ မော်ဒယ်လ် L လစ်ရှားရဲ့ အလှ ပုံရိပ်လေးများ……….
သွယ်လျပြေပြစ်တဲ့ ကိုယ်လုံးလေးနဲ့ ဆက်ဆီကျကျ မိမိုက်နေတဲ့ ချောကလျာရဲ့ အလှ ပုံရိပ်လေးများ…………